Ahoana no fanampiana ny fanatanjahan-tena amin'ny dobo mafana amin'ny rano manohitra fibromyalgia
20 / 09 / 2018 /Fanamarihana 0/i Ny fanaintain'aretina/av loza
Fibromyalgia dia aretina miteraka fanaintainana maharitra izay mety hanasarotra ny fanatanjahan-tena. Fantatrao ve fa olona maro manana fibromyalgia no mahazo tombony amin'ny fanaovana fanatanjahan-tena amin'ny dobo mafana? Betsaka ny anton'izany - ary hojerentsika amin'ny antsipiriany kokoa ireo momba an'ity lahatsoratra ity.
Ny fanaintainana lalina sy mafy amin'ny hozatra sy ny tonon-taolana dia matetika tafiditra ao amin'ny fiainana andavanandro ho an'ireo manana fibromyalgia. Izany no antony nifantohanay tamin'ny famolavolana fepetra sy ny fitsaboana izay afaka manampy amin'ny fanaintainana ny fanaintainana. Aza misalasala maneho hevitra raha manana fampidirana bebe kokoa ianao.
Araka ny voalaza dia vondrona marary manana fanaintainana mitaiza amin'ny fiainana andavanandro ity - ary mila fanampiana izy ireo. Miady ho an'ity vondron'olona ity izahay - sy ireo izay manana aretina hafa momba ny fanaintainana maharitra - mba hanana fotoana tsara kokoa hanaovana fitsaboana sy fanombanana. Toa anay ao amin'ny pejin'ny FB og fantsona YouTube ao amin'ny media sosialy hanatevin-daharana antsika amin'ny ady ho amin'ny fiainana andavanandro ho an'ny olona an'arivony.
Amin'ity lahatsoratra ity dia heverinay fa ny fampihetseham-batana amin'ny dobo rano mafana dia toy ny fanaintainana voajanahary ho an'ny fibromyalgia - ary maninona no misy fiatraikany tsara ho an'ireo izay manana aretina mitaiza fanaintainana sy rheumatism. Eo am-pototry ny lahatsoratra azonao atao koa ny mamaky tsikera avy amin'ny mpamaky hafa, ary koa mijery horonantsary misy fanazaran-tena namboarina ho an'ny fibromyalgia.
Ny fanatanjahan-tena ao anaty dobo rano mafana dia manana tombony betsaka momba ny fahasalamana - anisan'izany ireto valo ireto:
1. Fiofanana efa zatra ao anaty tontolo milamina
Ny rano dia misy vokany mampisondrotra - izay mahatonga ny fanazaran-tena amin'ny valahana sy ny toy izany mora tanterahina kokoa, nefa tsy manery ny hozatra sy ny tonon-taolana loatra. Rehefa miofana amin'ny dobo rano mafana isika dia mampihena ny fahafahan'ny ratra sy "lesoka" mety hitranga amin'ny endrika fanatanjahan-tena mahazatra.
Ny fampiofanana ny dobo mafana avy amin'ny rano, toy ny yoga sy ny pilates, dia fanatanjahan-tena malefaka, izay mety indrindra ho an'ireo manana fibromyalgia mahery vaika sy rhin-tsofina malefaka. Io dia kianjabe tsara ho an'ny fananganana tsikelikely ny fahafahan'ny hozatra mba hahafahany miatrika bebe kokoa hatrany rehefa mihamatanjaka ianao.
Betsaka ny olona mararin'ny fanaintainana mafy izay manimba ny fiainana andavanandro - izany no antony amoahanay anao Zarao ity amin'ny media sosialy ity lahatsoratra ity, Aza misalasala mankafy ny pejy Facebook anay ary lazao hoe: "Eny amin'ny fikarohana bebe kokoa momba ny fibromyalgia". Amin'izany fomba izany, ny olona iray dia afaka mampiharihary ireo soritr'aretina mifandraika amin'ity aretina ity ary manome antoka fa olona maro no raisina am-pahamatorana - ary amin'izany dia mahazo ny fanampiana ilainy Manantena koa izahay fa ny fitomboan'ny fiheverana toy izany dia afaka mitarika famatsiam-bola bebe kokoa amin'ny fikarohana momba ny fomba fanombanana sy fitsaboana vaovao.
Vakio koa: - Mety ho hitan'ny mpikaroka ny antony nahatonga ny 'Fibro zavona'!
2. Mampitombo ny fikorianan-dra ny rano mafana
Ny fihary, ny hozatra ary ny hozatra dia mila famelomana - ary izany dia mivoaka amin'ny ra mivezivezy. Ny fanatanjahan-tena sy ny fanatanjahan-tena dia manana ny fahafaha-manao ankapobeny mampiakatra ny ra mivezivezy manerana ny vatantsika. Amin'ny fanazaran-tena ao amin'ny dobo rano mafana, olona maro izay voan'ny rheumatism sy fibromyalgia dia mitatitra fa mihatsara ny fiantraikany ary mahatsapa fa mihamalalaka lalindalina kokoa ireo fibontsina hozatra, hozatra ary tonon-taolana matevina.
Ny hafanana ao anaty rano dia manampy amin'ny fisokafan'ny lalan-drà sy ny fivezivezena mikoriana malalaka kokoa noho ny tamin'ny fotoana nikatsoana kokoa ireo taona voalaza ireo. Amin'ny aretina miteraka fanaintainana maharitra, matetika ny olona iray dia mirona amin'ny "fanamafisana" - na dia tsy ilaina aza izany, ary amin'ny alàlan'ny famafana ao anatin'ireo fatotra hozatra lalina ireo dia misy ny fiofanana amin'ny dobo rano mafana.
Vakio koa: - Mino ny mpikaroka fa ireto Proteinina roa ireto dia afaka mamantatra ny fibromyalgia
3. Mampihena ny adin-tsaina sy ny tebiteby
Voarakitra an-tsoratra amin'ny fikarohana ataon'ireo manana fibromyalgia tranga ambony noho ny «tabataba». Midika izany fa ny hozatra, tendonon-taolana, taolam-bava mifangaro, nerve ary na ny ati-doha aza dia miady saina be mandritra ny andro. Ny fahazoana milamina sy ny fomba fianarana hampihenana ny tabataba sy ny fihenan-tsaina toy izany, noho izany dia lasa zava-dehibe ho an'ny olona voan'ny fanaintainan'ny fanaintainan'ny fanaintainana.
Matetika ny rano mafana dia miasa mampitony ara-tsaina rehefa vokatry ny onja mafana ao anaty pisinina. Ny adin-tsaina sy ny fikoropahana dia mora kokoa ihany koa ny esorina rehefa eo amin'ny singa mety ianao - dia ny dobo rano mafana.
Ny fepetra hafa izay afaka mampihena ny adin-tsaina amin'ny fiainana andavan'andro ary mandray anjara amin'ny fitomboan'ny angovo dia sakafo namboarina miaraka amin'ny fototry ny angovo mahasalama, fanomezana ny Q10, fisaintsainana, ary koa ny fikarakarana ara-batana ny tonon-taolana sy ny hozatra. Ireo dia naneho fa miaraka (na amin'ny azy manokana) dia afaka mandray anjara amin'ny fitomboan'ny angovo amin'ny fiainana andavan'andro. Angamba azonao atao ny manokan-tena mandritra ny 15 minitra aorian'ny fiafaran'ny andro, ohatra?
4. Manatsara ny kalitao matory
Voan'ny olana amin'ny torimaso ve ianao? Tsy irery ianao avy eo. Matetika ho an'ireo manana fanaintainan'ny fanaintainana dia sarotra amin'ny hatory, ary matetika izy ireo no mifoha amin'ny alàlan'ny fanaintainana.
Ny fanatanjahan-tena amin'ny dobo rano mafana dia mety hitarika ny fanatsarana ny torimaso tsara sy mora kokoa ny torimaso. Ny fihetsiky ny fampiofanana ny dobo rano mafana dia misy antony maromaro, fa ny sasany amin'ireo tena lehibe dia ny mampihena ny fihenjanana hozatra, ny tabataba eo amin'ny ati-doha ary noho izany dia mampihena ny fiasan'ny herinaratra ankapobeny ao amin'ny vatan'ireo izay manana fibromyalgia.
Misy fanafody hamonoana ny fanaintainana ary hahatonga anao hatory, saingy indrisy fa maro amin'izy ireo no manana lisitra lava misy ny vokany. Noho izany, zava-dehibe ny fahaizanao mampiasa ny fitsaboana anao amin'ny endrika fitsangatsanganana any anaty ala, ny fampiofanana amin'ny dobo mafana, ary koa ny fampiasana ny fitsaboana teboka ho an'ny hozatra marary sy milomano.
Vakio koa: Fandinihan-tena manohitra ny Fibromyalgia Mist
5. vesatra ambany amin'ny tonon-taolana mafy
Betsaka ny olona manana fibromyalgia no mahita fa ny fanatanjahan-tena mahery vaika (toy ny mihazakazaka eny amin'ny lalana mafy) dia mety miteraka soritr'aretina fibromyalgia miharatsy. Ao amin'ny fibromyalgia, ny valinteny toy izany dia mihamatanjaka kokoa noho ny amin'ny maro hafa noho ny fihenan-danja eo amin'ny hery fiarovana ny vatana sy ny rafitry ny rafitry ny otrikaretina autonomika.
Ny fiofanana amin'ny dobo rano mafana dia tanterahina amin'ny rano - midika izany fa ambany ny fiofanana amin'ny hozatra sy ny tonon-taolana. Ny fihenan-tsofina be amin'ny tonon-taolana dia matetika, amin'ny toe-javatra maro, dia miteraka fihetsika mamaivay amin'ireo izay misy fibromyalgia sy hypersensitivity - izay mitarika fanaintainana miaraka sy aretin-kozatra mifandraika amin'izany.
Noho izany, ny fanatanjahan-tena amin'ny rano mafana dia mety indrindra amin'ny rheumatics sy ireo manana fanaintainan'ny fanaintainana.
Vakio koa: Izao no tokony ho fantatrao momba ny Fibromyalgia
6. Mampitombo ny hozatra sy ny fihetsehana miaraka
Mafy ny hozatra ao aoriana sy ny tendany? Ny fanaovana fanatanjahan-tena amin'ny dobo rano mafana dia fomba iray tena tsara hampiakarana ny fihetsehana amin'ny hazondamosina sy ny tendany, ary koa mandray anjara amin'ny asa fanentanana lehibe kokoa amin'ny hozatra hozatra.
Izy io dia ny rano mafana sy ny fanatanjahan-tena malefaka izay mahomby indrindra raha manampy amin'ny fampivoarana ny hozatra sy ny lamosina. Io indrindra ny antony fanatanjahan-tena ity dia ilaina amin'ny famelomana soritr'aretina sy ny fanatsarana fiasa.
Raha manana fanontaniana momba ny fomba fitsaboana sy ny fanombanana ny fibromyalgia ianao dia mamporisika anao hiditra amin'ny fikambanan'ny rheumatism eo an-toerana ianao, midira amina vondrona mpanohana amin'ny Internet (atolotray ny vondrona facebook «Rumatika sy fanaintainana mahatsiravina - Norvezy: Vaovao, firaisankina ary fikarohana«) Ary misokatra amin'ny olona manodidina anao fa sarotra aminao indraindray ary mety hihoatra ny toetranao vonjimaika izany.
7. Mandray anjara amin'ny fahasalamana tsara ao am-po
Rehefa manana fanaintainana mafy tsy tapaka ianao dia mety ho sarotra ny manana asa ampy - ary izany dia mety hisy fiatraikany ratsy amin'ny fahasalaman'ny fonao. Ao amin'ny dobo mafana mafana dia afaka miasa mafy ianao ary miakatra ny fitepon'ny fonao nefa tsy mahazo aina.
Ny fanatanjahan-tena ao anaty dobo rano mafana dia endrika fanatanjahan-tena malemy izay manampy amin'ny fanatsarana ny fahasalaman'ny kardia. Manampy amin'ny fampihenana ny valan'ny aretim-po toy ny aretim-po sy ny lalan-drà io.
8. Mihaona amin'ny namana mahatakatra anao sy ny fahorianao ianao
Ny fiofanana amin'ny dobo rano mafana dia miseho isaky ny vondrona - matetika misy sombin-javatra 20 na 30. Miaraka amin'ny olona mararin'ny aretina toy izany, dia azonao ny fahatakarana ny atao hoe ao anatin'ny toe-javatra fanaintainana toa ny iray itiavanao azy. Mety hahita namana tsara ho avy amin'ny fiofanana ihany koa ianao?
Midira ao amin'ny vondrona Facebook «Rheumatism sy fanaintainan'ny aretina - Norvezy: Fikarohana sy vaovao»(Tsindrio eto) raha ny fanavaozam-baovao farany momba ny fikarohana sy ny fanoratana ny media momba ny aretina mitaiza. Eto, ny mpikambana dia afaka mahazo fanampiana sy fanohanana - isaky ny andro ihany - amin'ny alàlan'ny fifanakalozana ny zavatra niainany sy torohevitra.
Tena mankasitraka tokoa isika raha mila misoratra anarana maimaimpoana amin'ny fantsona Youtube izahay (tsindrio eto). Ho hitanao ato ny fandaharana fanatanjahan-tena tsara ampifanarahana amin'ny rheumatics, ary koa horonantsary siansa momba ny fahasalamana.
Manantena izahay fa ity lahatsoratra ity dia afaka manampy anao amin'ny ady amin'ny fibromyalgia sy ny fanaintainana maharitra.
Ary, mila mangataha tsara mba hizara ity lahatsoratra ity amin'ny media sosialy na amin'ny alàlan'ny bilaoginao (aza misalasala mifandray amin'ny lahatsoratra). Ny fahatakarana sy ny fitomboan'ny fifantohana no dingana voalohany mankany amin'ny fiainana andavanandro tsara kokoa ho an'ireo izay manana fibromyalgia.
Fibromyalgia dia aretina mitaiza fanaintainana maharitra izay mety hanimba tanteraka an'ilay olona voakasik'izany. Ny diagnostika dia mety hitarika amin'ny fihenan'ny angovo, ny fanaintainana isan'andro ary ny fanamby isan'andro izay mihoatra lavitra noho ny manelingelina an'i Kari sy Ola Nordmann. Manontany anao aminay amin-katsaram-panahy ianao mba hitady sy hizara an'io ho an'ny fitomboan'ny fifantohana sy ny fikarohana bebe kokoa momba ny fitsaboana fibromyalgia. Misaotra betsaka an'izay rehetra tia sy mizara - angamba afaka miaraka hiaraka hahita vahaolana isika indray andro any?
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/slik-hjelper-trening-i-varmtvannsbasseng-mot-fibromyalgi-2.jpg?media=1648573622 368 700 loza https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 loza2018-09-20 20:01:152020-05-03 13:37:14Ahoana no fanampiana ny fanatanjahan-tena amin'ny dobo mafana amin'ny rano manohitra fibromyalgia
Fomba fanampiana voajanahary ho an'ny Fibromyalgia Ireo toeran'ny hozatra ratsy 18 ireo dia afaka milaza raha manana fibromyalgia ianao